Haïti, mitombo ny fiampangàna ny governemantan’i Jovenel Moïse ho mifandray tendro amin’ireo mpanomana heloka bevava · Global Voices teny Malagasy
Tombontsoa ara-toekarena sy ny fifidianana no tena antony
Voadika ny 27 Aogositra 2020 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, English, русский, Français
Pikantsarin'ny lahatsary nisy ny antsafa nifanaovana tamin'i Jovenel Moïse, nalaina tamin'ny fantsona youtube-n'ny masoivoho EFE, tamin'ny 7 Desambra 2019.
Hatramin'ny nisian'ilay fandripahana nitranga tao amin'ilay faritra mahantra ao “La Saline”, ny alin'ny 13 hifoha 14 Novambra 2018, nahafatesana olona 50 noho ny firongatr'ireo andian'olona mitampiadiana, tsy mitsahatra ny mitombo ny tahan'ny famonoana olona ao Haïti. Raha tsy hiresaka afa-tsy ny faritra be mponina ao Port-au-Prince, manodidina ny 243 ireo olona maty nisy namono nandritra ny volana enina voalohany tamin'ity 2020 ity. Firaisan-tendro eo amin'ny governemantan'i Jovenel Moïse sy ireo mpanao heloka bevava nomanina no hitan'ireo mpanao gazety sy ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona ao anatin'izy ireny, noho ny tanjona ara-toekareny sy ho amin'ny fifidianana.
Efa hatramin'ny 2019 no very tsikelikely ny fahatokisana ny governamantan'i Jovenel Moïse, miaraka amin'ny fihamafisan'ireo hetsika fanoherana azy, ary tsy mbola hita mihitsy aloha hatreto izay fihatsaran'izany noho ireo fiampangana firaisan-tendro, fitondràna tsy refesimandidy ary herisetra ataon'ny polisy amin'ireo rehetra manao hetsika manohitra ny governemantany. Nanomboka ny Febroary 2019 dia nanenika ny firenena ireo hetsika itakiana ny fametraham-pialàn'ny governemantan'i Jovenel Moïse, ny sasany amin'ireny dia manakiana azy noho ny tsy fanajàny ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka, ny hafa indray mampahatsiahy ireo fiampangàna kolikoly anenjehana azy. Manodidina ny 42 no maty ary 86 no naratra voarakitry ny ONU tamin'ny Septambra 2019 nandritra ireo hetsipanoherana ny governemanta.
Raha ny momba ny tsy fandriampahalemana mahazo laka ao Haïti, ny Ivontoerana fandalinana sy fikarohana momba ny zon'olombelona (CARDH) dia efa naminavina sahady tamin'ny Desambra 2018 fa ny fitondràna, ny fahefam-pitsaràna, ary ny polisy dia samy mangina manoloana ireo fandripahana ireo. Ny Jona 2019, ny Iraky ny Firenena Mikambana ho fanohanana ny fitsaràna ao Haiti sy ny Kaomisera Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana ho an'ny zon'olombelona dia nizara tatitra iray izay namoaka tamin'ny antsipirihany ireo fiampangana momba ny maha-voarohirohy an'i Richard Duplan, solotenam-panjakana, sy polisy telo lahy, tamin'ilay fandripahana tao La Saline.
Ny Jona 2020, nitombo ireo fiampangàna ny fisian'ny firaisan-tendro eo amin'ireo antoko pôlitika sy ireo vondrona mitam-piadiana, izay mitolona mafy hahazo fahefana pôlitika avy any amin'ireo faritra. Araka ny tatitra farany navoakan'ny fikambanana mpiaro ny zo maha-olona Fondasyon Je Klere (FJKL), ilay fandripahana tao La Saline dia nitranga noho ny adin'ireo andian'olona mitam-piadiana izay miara-dia amin'ireo mpanao pôlitika mba hahazoana ny fifehezana ny vola miditra avy amin'ny tsenan'i La Croix-des-Bossales, tsena iray goavana ao an-drenivohitra. Mety ho fifandirana teo amin'ny andiany « Nèg chabon », malaza ho akaiky ny antoko eo amin'ny fitondràna, Tèt Kale (PHTK), sy ny tarika « Bout Janjan », izay nanakaiky an'ilay solombavambahoaka teo aloha avy amin'ny mpanohitra, Roger Milien, izay manamafy fa nahafantatra ny fandaminana ilay fandripahana tao La Saline. Nandritra ny fandraisam-pitenenany ho an'ny daholobe, im-betsaka ny filoha no namaly tamin'ny fomba mivantana ireny fiampangàna ireny. Manazava ilay tatitra:
Ny tena zavamisy amin'ireo faritra fehezin'ireo andian'olona dia, efa ho fotoana vitsivitsy ihany, voamariky ny fihenjanana tsy miato ho tendro roa : andian'olona mpomba ny governemanta na mpomba ny mpanohitra / mpanohitra an'i Jovenel.
Araka ny ambaran'ny Tambajotra nasiônaly mpiaro ny zo maha-olona (RNDDH), nisy fandripahana tsy mifankaiza loatra ami'izay nitranga tao La Saline notanterahana tany amin'ireo faritra toa an'i Bel-Air, Cite-Soleil, Chancerelles, « Tokyo », Fort Dimanche ary Pont-Rouge. Ireny dia tanàna malaza ao amin'ny faritra be mponina ao Port-au-Prince, izay anjakan'ny tsy fandriampahalemana sy zara raha misy fanarahamason'ireo manampahefana avy amin'ny polisy. Tamin'ny Novambra 2019, nanoratra ny RNDDH tao anatin'ny fampitam-baovaony:
Araka ireo vaovao voalohany vao voaray izao […], ireny fanafihana ireny, notanterahan'ireo andian'olona mitam-piadiana notarihan'i Jimmy Chérizier antsoina hoe Barbecue sy Ti Sonson fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Ti Chèf, avy ao amin'ny Base Krache Dife, dia ireo manampahefana mpanatanteraka no nikotrika azy.
Ny RNDDH, ao anatin'ny tatitra farany navoakany tamin'ny 23 Jona 2020, dia manipika fa nisy fitaovan'ny Pôlisim-pirenena ao Haiti nampiasaina nentina nanatontosa ireo fandripahana ireo, ary manonona anarana polisy maromaro mifandray tendro amin'ilay “federasiônan'ireo andian'olona mitampiadiana G9”. Isan'izy ireny ilay pôlisy fahiny Jimmy Chérizier, lasa lehiben'ny iray amin'ireny andian'olona mpanao heloka ireny ao anatin'ny G9, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe “Barbecue”.
Na nisy aza didy fampisamborana azy navoakan'ny minisitry ny fitsaràna noho ny maha-voarohirohy azy tamin'ilay fandripahana tao La Saline, mbola mivezivezy an-kalalahana mandrakariva i Barbecue. Tamin'ny Jona 2020, izy no nandrafitra ilay vovonana iray iarahan'ny G9 sy ireo andiany hafa ary, ny volana taorian'io, nibahana arabe maro sy sampanan-dàlana tany aminà tanàna maro tao an-drenivohitra ny G9 mba hitakiany tamin'ny governemanta hanome azy ireo fanekena fisiana araka ny lalàna.
Araka ny voalazan'ny Fondasyon Je Klere, ireo andiany ao anatin'ny G9 sy i Barbecue dia “olona mpamita iraka” karamain'ny governemanta.
ZZZZ Haiti – Fampanjakàna andian'olona mitam-piadiana: Asan'ny governemanta ny G9, mba hifehezany ireo fifidianana hoavy, araka ny tatitra iray avy amin'ny FJKL
Taona iray mahery taorian'ilay fandripahana tao La Saline, toa mbola very anjavony ihany ireo tatira avy amin'ny fitsaràna. Misintona lakolosy fanairana ireo fikambanana avy ao an-toerana sy ireo masoivoho ary ireo diplaomaty mba hahazoan'ireo niharam-boina ny rariny, izay nanambara tamin'alahelo ny tsy fisian'ny fitarihandàlana avy amin'ny governemanta.
Ilay mpanao gazety, Parker James Asmann, no namintina tao anatin'ny Insight Crime tahaka izao:
Ny vovonana G9 dia toa misitraka fifandraisana akaiky amin'ny governemantan'ny filoha Jovenel Moïse. Tsy ho voahenjika mihitsy araka izany ireo lehibena andian'olona raha mbola mandray anjara amin'ny fampandriana fahalemana any amin'ireo tanàna feheziny. Takalon'izay, andian-tafika mpandeha an-tongotra tsy mivadi-belirano no ijeren'ny governemantan'i Moïse azy ireo, izay mamoritra ny tsy fandriampahalemana, manakenda ireo feo mpanohitra ary manamafy ny fanohanana ara-pôlitika manerana ny renivohitra.
Toa misitraka tombontsoa ara-toekarena io tambajotra ampangaina io, ary koa tombontsoa ara-pifidianana. Ampangain‘ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona ny governemanta ho mampiasa ireo lehiben'andian'olona ireo mba hampihorohoroana ireo izay mety ho mpanohitra azy ireo amin'ny pôlitika, raha toa ka tsy mbola notanterahana hatramin'izao ireo fifidianana solombavambahoaka tokony ho natao ny Novambra 2019, na teo aza ireo antso marobe. Araka izany dia mety ampiasaina mba hitazonana ny ampihimamba amin'ireo biraom-pifidianana atsy ho atsy ireny vondrona mitam-piadiana ireny, amin'ny alàlan'ny famoronana rivopiainana feno tahotra tsy hitondra tombontsoa ho an'ireo mpifidy.
27 Oktobra 2021Karaiba
31 Aogositra 2021Mediam-bahoaka
24 Jolay 2021Karaiba